(မှိုင်း၊ ကိုယ်တော်၊ သခင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ထိုနောက် ကဝိသာရ မြဉ္ဇူကျမ်း၊ ပရမတ္တသံခိပ်အခြေကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)တို့ကို ဆရာလွမ်း အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာတိုင်းမ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေမှု ရပ်ဆိုင်းသွားသောအခါ ဟင်္သာတမြို့ အမရဝတီစာပုံနှိပ်တိုက်တွင် စာပြုအဖြင့်နှင့် အယ်ဒီတာအဖြစ် ခေတ္တဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။
? ၊ ပုံတောင်နိုင် မော်ကွန်း
? ၊ တရုတ် အရပ်ရပ်ရောက်သည့် အရေးတော်ပုံ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း&oldid=558069" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။